Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Mental Health စိတ်ကျန်းမာရေး
စိတ်လှုပ်ရှားမှု ကောင်းမွန်လျက် စိတ်ရောဂါ ကင်းရှင်းနေလျင် စိတ်ကျန်းမာသည်ဟု ခေါ်သည်။ ဘဝတွင် အပြုသဘောဆောင်၊ အပေါင်းလက္ခဏာ အမြင်ရှိရန်၊ အခက်အခဲပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရာတွင် အလျော့အတင်းရှိပြီး။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လူတဦးအနေနှင့် လူ့ အဖွဲ့ အစည်းအား ကောင်းကျိုးချမ်းသာ ဖြစ်စေရန် ပြုမူ-နေထိုင်တတ်ရန် ဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာသည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးတရပ် ဖြစ်နေသည်။ ရောဂါပေါင်းစုံ၏ ၁၄% ရှိသည်။ ကူးစက်ရောဂါများမှအပဆိုလျင် ၂၈% ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၃ဝ% သည် စိတ်ရောဂါ တမျိုးမျိုးရှိနေကြသည်။
အများဆုံးဖြစ်သည့် စိတ်ရောဂါများမှာ -
၄။ ဒီမင်းရှားရောဂါ တို့ ဖြစ်ကြသည်။
နာမည်ကျော် ဒတ်ခ်ျ ပန်းချီဆရာကြီး (ဗင်းဆင့်-ဗန်ဂိုး)သည် စိတ်ကျရောဂါရှိပြီး ထိုစဉ်က ကုသနည်း မရှိသေးသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားခဲ့ရသည်။
အခြားသော စိတ်ရောဂါရှိသည့် ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များ
1. ဂီတပညာရှင် ဗီသိုဘင်၊
2. ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ဝစ်စတန်ချာချီ၊
3. သဘာဝသိပ္ပံညာရှင် ချားလ်ဒါဝင်၊
4. တီထွင်သူ အယ်ဒီဆင်၊
5. စာရေးဆရာ အားနက်စ် ဟယ်မင်ဝေး၊
6. ကဗျာဆရာ ဗစ်တာဟူးဂိုး၊
7. အမေရိကန်သမတ ဂျက်ဖါဆင်၊
8. အမေရိကန်သမတ လင်ကွန်း၊
9. ပိသုကာ မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လို၊
10. မီးအိမ်ရှင်မ ဖလောရင့် နိုက်တင်ဂေး 11. သိပ္ပံပညာရှင် နူတန်
စိတ်ကျန်းမာရေး ကျားမ ရွေးသည်
22-8-2011 In mental illness Men more likely to develop substance abuse, antisocial problems; Women more likely to develop anxiety, depression
စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝေဒနာတွေကို ဆန်းစစ်လိုက်ရင် ယောက်ျားတွေမှာ ဖြစ်ကြရတာနဲ့ မိန်းမတွေမှာ ဖြစ်ကြရတာ မတူပါ။
"အမျိုးသမီးများမှာ စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲတာနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းတာ အဖြစ်များတယ်။ ယောက်ျားတွေကတော့ မူးယစ်-ဆေးဝါးစွဲတာနဲ့ လူနေမှုအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ အဆင်မပြေတာတွေ အဖြစ်များတယ်" လို့ အမေရိကန် စိတ်ပညာအသင်းကနေ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
Journal of Abnormal Psychology မူမှန်မဟုတ်တဲ့ စိတ်ပညာ ဂျာနယ်ထဲမှာ လူတွေ အများဆုံး ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ရောဂါတွေနဲ့ ကျား-မ ခွဲခြား လေ့လာချက်ကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ စိုးရိမ်စိတ် လွန်ကဲမှု တွေကနေ အတွင်းဘက် ဦးတည်တဲ့ စိတ်လှုတ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်စေတာများတယ်။ ဒါတွေက Withdrawal ဆုတ်ခွါ-ကင်းပြတ်မှု၊ အထီးကျန်မှု၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းတွေကနေ ဆက်လာတာတွေ ဖြစ်တယ်။
ယောက်ျားတွေဟာ စိတ်လှုတ်ရှားမှုတွေကို အပြင်ဘက်ဆီ ဦးတည်ကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကြမ်းတမ်းမှု၊ ယာယီ-တုံ့ပြန်မှု၊ သွေးဆောင်မှုနဲ့ လုပ်သင့်တာကို မလုပ်ခြင်း ဆိုတာတွေကို ရွေးချယ်တတ်တယ်။ လိင်ခြားနားမှုဟာ အတွင်းဘက် ဦးတည်ခြင်းနဲ့ အပြင်ဘက်ဆီ ဦးတည်ခြင်းတွေပါ ခြားနားကြတာ ဖြစ်တယ်။
၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၁ အတွင်းက National Institutes of Health မှာရှိတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို လေ့လာခဲ့တယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်အထက် လူပေါင်း ၄၃ဝ၉၃ ယောက်ကို လေ့လာတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အမျိုးသား = ၄၃%၊ အမျိုးသမီး = ၅၇% (အဖြူ = ၅၆့၉%၊ အသားဝါ-ညို = ၁၉့၃%၊ အမဲ = ၁၉့၁%၊ အာရှ၊ ဟဝိုင်ယီနဲ့ ပင်လယ်နေ = ၃့၁%၊ ဌာနေလူနီ နဲ့ အလာစကာ = ၁့၆%၊) ပါတယ်။
အရင် လေ့လာမှုတွေအရ အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်ဓါတ်ကျတာ ပိုဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယောက်ျားတွေထက် ပိုပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်တတ်ကြတယ်။ ပြသနာဖြေရှင်းရေးထက် အနုတ်သဘော စိတ်ခံစားမှုကို ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်လေ့များကြလို့ဘဲ။ ဒီတွေ့ရှိချက်ကနေ စိတ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ကုသရေးမှာ လိင်ခွဲခြား ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ သိလာစေပါတယ်။
အတိတ်က လေ့လာချက်တွေအရ အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်ရောဂါအဆင့် မရောက်ခင်မှာ စိတ်မတည်ငြိမ်-စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဘေးပါတ်ဝန်းကျင်ကနေ ဖိစီးမှုတွေကို အတွင်းဘက်ဆီ သွင်းယူတတ်ကြတယ်။
University of Minnesota က Nicholas R. Eaton, MA ပြောတာက "စိတ်ကျနေကြတဲ့ စိုးရိမ်စိတ် ကဲနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်မလာစေအောင် လုပ်ရပါမယ်။" "ယောက်ျားတွေဆိုရင် ဘာတွေ လုပ်ပါဆိုတဲ့ အစီစဉ်ချပေးတာနဲ့ ကြမ်းတမ်စိတ်ကနေ ဖျက်ဆီးချင်စိတ် မဟုတ်တဲ့ဆီ ဦးတည်ပေးဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။" စိတ်ရောဂါ အမျိုးအစားပေါင်း ၅၃ မျိုးခွဲထားသည်။
4. Agoraphobia w/o history of Panic Disorder
9. General Anxiety Disorder
10. Attention-Deficit Hyperactive Disorder
11. Asperger’s Disorder
12. Autistic Disorder
13. Conduct Disorder
14. Oppositional Defiant Disorder
15. Separation Anxiety Disorder
16. Tourette’s Disorder
17. Anorexia Nervosa
18. Bulimia Nervosa Mood Disorder
20. Bipolar Disorder (Manic Depression)
21. Cyclothymic Disorder
22. Dysthymic Disorder
24. Multi-Infarct Dementia
25. Dementia Associated with Alcoholism
26. Dementia of the Alzheimer Type
27. Dementia Personality Disorders
28. Paranoid Personality Disorder
29. Schinoid Personality Disorder
30. Schizotypial Personality Disorder
31. Antisocial Personality Disorder
32. Borderline Personality Disorder
33. Histrionic Personality Disorder
34. Narcissistic Personality Disorder
35. Dependant Personality Disorder
36. Avoidant Personality Disorder
37. Obsessive-Compulsive Personality Disorder
39. Delusional Disorder
40. Brief Psychotic Disorder
41. Schizophreniform Disorder
42. Schizoaffective Disorder
43. Shared Psychotic Disorder
44. Alcohol Dependence
45. Amphetamine Dependence
46. Cannabis Dependence
47. Cocaine Dependence
48. Hallucinogen Dependence
49. Inhalant Dependence
50. Nicotine Dependence
51. Upload Dependence
52. Phencyclidine Dependence
53. Sedative Dependence
• Bipolar Disorder စိတ်အခြေနှစ်ခွရောဂါ
• Depression (1) စိတ်ကျရောဂါ
• Depression (2) ပုထုဇ္ဇနော
• Depression (3) စိတ်ကျခြင်း
• Depression (4) စိတ်ကျရောဂါ ကမ္ဘာမှာ